Le Pen oo ka soo horjeedda caalamiyaynta - BBC Somali
Le Pen oo ka soo horjeedda caalamiyaynta
Hogaamiyaha xisbiga midig fog ee dalka Faransiiska, Marine Le Pen oo soo bandhigaysa siyaasaddeeda doorashada ayaa weerar ku qaaday caalamiyaynta iyo Muslimiinta xagjirka ah.
Murashaxadan oo madaxwaynenimo ugu tartamaysa xisbiga National Front oo ku sugan magaalada Lyon ee bariga ku taala ayaa saxafiyiinta u sheegtay in caalamiyayntu ay si tartiib ah u marjinayso oo u laynayso bulshooyinka.
Xisbigeedu wuxuu ballan qaaday in uu cod fursad u siin doono dadka Faransiiska ah si ay afti u qaadaan ka mid ahaanshaha Midawga Yurub haddii ay dhicisoobaan in ay dib uga wada xaajoodaan heshiisyada ay hadda wada galeen.
Dadka Faransiiska ayaa codkooda ka dhiiban doona 23 bisha Abriil doorasho ay u muuqato in ay cid kaste ku guulaysan karto arrintaas oo aan tobanaan sano dalkaas soo marin.
Francois Hollande oo talada haya ayaan xilka markale isu soo taagaynin.
Hogaamiyaha xisbiga FN ayaa u aragta in ay caawin doonto aragtida ka dhalatay doorashada Donald Trump iyo ka bixitaanka Midawga Yurub ee Brirain.
Le Pen oo diiday in ay celiso lacagta Midawga Yurub
Mucaaradka Faransiiska: Soogalootiga yaan waxbarasho bilaash ah la siinin
Weriyaha BBC-da ee magaalada Paris, Lucy Williamson ayaa sheegaysa in xisbigan oon waligii ku guulaysan in kabadan 30 boqolkiiba codka dadwaynaha uu isku dayay waayadan in uu hagaajiyo sawirkiisa si uu baaqiisa meel dheer u gaarsiiyo.
Araada dadwaynaha laga aruuriyay waxay muujinayaan in Le Pen ay ku guulaysan doonto wareega koobaad balse laga adkaan doono wareega labaad.